Standard uye Policies - Ningbo Sunsoul
propulsion Strong anogara rakabva yakasimba womukati core.
Sunsoul proactive uye inoshanda yemakambani nhungamiro ndivo hwaro kukurumidza kukura wekambani. The zvakaoma-nokushanda uye kuedza vashandi pana Sunsoul kwemakore akawanda anogona seizvi kunyika shanu yemakambani mitemo pasi apa, izvo zvakabatsira kuti pave kukura chekambani akasiyana-siyana oushumiri dzakadai pakutsvakurudza uye kukura, tsika, Kudyidzana makomborero, mushandi kukura ezvokutengeserana basa.
• Zvokuvandudza Customer makwikwi
Vatengi vari abudirire yedu. Tinobuda zviitiko yedu makasitoma edu uye zvinopa nzwisisika negadziriso kuti vabudirire pazvinangwa zvavo zvakanyatsonaka uye zvinobudirira.
• Innovation Kunotungamirira Future
Innovation ndiyo ropa redu. Tinobudirira kutendeuka hope mu ruzivo uye zvigadzirwa. nokuveza yedu kumucheto ndiyo okugadzira zvinhu uye zvakaitika.
• Zvokuvandudza Company Kukosha
We chamutsa kunobatsira kukura kuitira inogona kuenderera kubudirira leveraging edu akanaka mabhizimisi Portfolio. Tikavavarira kukwana uye votevera kunakisisa.
• Ziva kuti Dream revashandi
vashandi Mutsindo ndidzo nheyo yekubudirira kambani yedu. tsika dzedu kambani kunoratidzwa kushinga, pachena uye kuremekedzana. Tinokurudzira vashandi vedu kutora muridzi uye zvikure pamwe chete kambani.
• Gamuchira Responsibility Social
Tiri kuita mukusimudzira pasocial kukura kwacho kuburikidza kuvandudza, mazano uye nzira itsva ruzivo. Tinosungirwa yezvisikwa tsika, zvakanaka yemakambani chizvarwa uye utano ezvinhu. Kuvimbika anotungamirira maitiro atinoita dzedu vashandi, mabhizimisi vadyidzani uye shareholders.
Quality Policy: Passion nokuda Zvakaisvonaka
• Zero Kushivirira nokuda Zvisina Kumira
mabasa edu tinotungamirirwa akatarira zvakaoma kurega chero kukundikana zvinhu zvedu uye muitiro. We funga Zero Zvisina Kumira somunhu chinangwa chine musoro. We kutsigira hurongwa kuvandudzika mishonga uye muitiro.
• Customer Kugutsikana
mabasa edu zviri mutengi chakabatikana uye tinosungirwa kukudziridza inobudirira kudyidzana kubva pakutanga, nekushandisa zvinobudirira chirongwa uye processing utariri kuti vhoriyamu nemushonga, zvose yose lifecycle.
• Kuramba Improvement
musimboti wedu bhizimisi iri kungoramba kuvandudza makwikwi edu. Kuva zvakadzama midzi-chikonzero kuongorora nokushandisa PDCA uye Six Sigma unhu maturusi, kutsanya uye hurongwa kuvandudzika kuti chigadzirwa uye muitiro, tsika zvakanakisisa kuudzawo uyewo zvakagadzirwa ndidzo nheyo kuwedzera yepamusoro uye yauinayo.
• Entrepreneurial Spirit, Empowerment & Kuita
• Tinokurudzira kuti entrepreneurial mweya, kupa simba uye kunobatanidza vashandi edu akaramba uye zvakanyatsorongwa kukura uye utilizing zivo yavo, zvakaitika uye unyanzvi.
• Environmental, Occupational Health uye Safety Policy
• Tine mutoro chivimbiso ushamwari ezvinhu edu, kugara pedyo pamutemo uye mamwe zvinodiwa, uye kutanga yakachengeteka uye utano rekushanda vashandi vose nguva dzose.
• Kurera vashandi 'kuziva zvakanaka uye utano, tinokurudzira vashandi vose kubatanidzwa chekuita yakachengeteka uye utano pakudzidza.
• Isu kuongorora zvinogoneka ekushandiswa zvemhoteredzo mukutanga zvokukura chigadzirwa uye muitiro kukura. Zviri chinangwa chedu kudzivirira kana kuderedza kusvibiswa.
• Isu zvakare kuderedza yavapo Zvinosvibisa uye zvaikosha kusvibiswa mune mukugadzira kwacho, kuburikidza kuramba kunatsiridza kuti vashandi vose vari kuita.
• Kuti achisimbisa yakachengeteka, utano uye hwakavimbika anoshanda zvakatipoteredza chikamu chedu mumagariro basa.